လူသားအားလုံးအတွက်: ဆေးလိပ်ကြိုက်သူတွေအတွက် အကောင်းဆုံးပုံတွေ
Posted by မိုးယံ at 3:17 AM Email ThisBlogThis!Share to TwitterShare to FacebookShare to Pinterest
pone ...do u smoke ?
သောက်ဖူးမှ အရသာ သိမယ်နော်။
မကြည့်ရဲလို့ လက်နဲ့ကာပြီး ကွန်မက်ရေးသွားတယ်။
မင်း ကော ???
မောင်ပွင့်ဖြူထွန်း နဲ့ ဒေါ်ကြောင်မျိုး ခင်ဗျားး ကျွန်တော်က ငါးတန်းကျောင်းသား ဘ၀လောက်မှာ ဆေးလိပ်ကို စမ်းသပ်သောက်ပြီး ခုနှစ်တန်း ရှစ်တန်းလောက်မှာ တစ်လိပ်စ နှစ်လိပ်စ သောက်ပါတယ်... ကိုးတန်း ကျောင်းသား ဘ၀မှ ဆယ်တန်းအောင် ပြီး သုံးနှစ်အထိ တစ်နေ့ တစ်ဘူးခွဲသောက်ပါသည်။ ယခု တော့ တစ်နေ့ နှစ်လိပ်သော်လည်းကောင်း တစ်လိပ်သော်လည်းကောင်းပုံမှန် သောက်နေဆဲပါ... ဒါကအကြမ်းဖျင်းပြောတာပါခင်ဗျာ တိတိကျကျ မဟုတ်သေးပါဘူး.. တစ်ကယ်လို့များ သိချင်သေးရင် အွန်တွေ့တဲ့အခါ မေးမြန်ကြပါခင်ဗျ.. ကျွန်တော်က စကားကို ရှည်ရှည်မပြောတတ်လို့ပါ... ဒါကလည်း မပြောချင်လို့မဟုတ်ရပါခင်ဗျာ... ကိုယ်က စကားစကားပြောပါများစကားထဲက ဇာတိပြဆိုတဲ့ စကားလိုများဖြစ်နေမလားလို့။ ပြီးတော့ နှုတ်တစ်ရာစာတစ်လုံး ဆိုသလိုလေ... ကျွန်တော်အများကြီးပြောနေလည်း အဆင်ပြေမှ ပြေပါ့မလားလို့ စိုးရိမ်တာကလည်းပါတယ်လေ...
ဦးဇော်ပြောသလိုပါပဲ သောက်ဖူးမှ သိမှာပါ.. ကျန်းမာရေးအပိုင်းကို အရမ်းတာဝန်ရှိတဲ့.. (ဥပမာ မမကွန်တို့လို)သူတွေကလဲ လူတွေ့တိုင်း တရားဟောသင့်ပါတယ်။ ကိုယ်မသောက်သော်လည်း (နတ်သမီးတို့လိုပေါ့) အငွေ့ရှူမိရင်လည်း အလကားနေရင်းထိုင်ရင် ရောဂါရတတ်ကြောင်းပါ (မယုံရင် မမကွန်မေးကြည့်) အားလုံးကိုကျေးတမာတယ်.. သူများတွေလိုလည်း ကွန်မန့်တွေကနေ ပြန်ဖြေလေ့မရှိတော့မှားမှာစိုးတယ်ဗျာ.. ပြီးတော့ကိုယ်ကလည်း စကားအများကြီး မပြောတတ်တာလဲ ပါတယ်... နောက်များမှပဲ .......
ဟမ်........ ထိုင်းက ဆေးလိပ်ဘူးခွံကပုံတွေ ဓါတ်ပုံရိုက်ပီးတင်လိုက်အုန်းမယ်........ မKOM တို့ဆို လက်တင်မကဘူး ခြေနဲ့ ပါကာပီး လာကြည့်ကြလောက်တယ်........... တွေ့ ကြသေးသပေါ့........ ငွင်းငွင်း